mulching के हो? हामीलाई उदाहरण निम्न प्रयोग, यो अवधि व्याख्या गर्न प्रयास गरौं। प्राकृतिक तरिकामा रूखहरू र shrubs खसेको पात को एक पत्र खेल्छ अन्तर्गत twigs Rot र सुक्खा घाँस। यी जैविक अवशेष, बाहिर सुखाने weathering र क्षरण देखि माटो जोगाउन। पत्र जस्तै क्रप बिरुवाहरु गठन गर्ने कुनै समय छ अन्तर्गत त्यसैले यसलाई आवश्यक विशेष कृषि प्रविधी, भनिन्छ mulching प्रयोग छ।
, को बेड, फूल बेड मा माटो कवर shrubs र फल अन्तर्गत रूखहरू, कृत्रिम सुरक्षा तह - कि mulching छ। चयन गरिएको भाग पूर्णतया ढाकिएको हुन सक्छ एक गीली रूपमा मात्र पङ्क्तिहरू बीच र। , दूर वर्षा द्वारा धोए हुनबाट माटो संरक्षण weathering र अत्यधिक तापमान साथै mulching किनभने चिस्यान राम्रो माटो मा संरक्षित छ, हजारी संख्या कम गर्न सक्छ, र भारी weeding छुटकारा गर्न। गीली सामा एक अपारदर्शी सामाग्री द्वारा सूर्यका कि कमी बढ्न रोक्छ, त्यसैले बेड सफा छन्। यसबाहेक, सिँचाइ पछि एक ठोस पाप्रो सुखाने छ। Mulching सक्रिय जहाँ यो माटो मा चिस्यान को पर्याप्त रकम कायम गर्न फरक गाह्रो छ सुखा क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ।
सामाग्री को एक किसिम मा गीली रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जैविक र अकार्बनिक: ती सबै दुई प्रकार मा विभाजित गर्न सकिन्छ। पहिलो समूह mulching फिलिम (कालो वा रंग, तर पारदर्शी छैन) र अन्य कृत्रिम सामाग्री को लागि, छत महसुस, छत समावेश छ। जस्तै जैविक mulches sawdust, रूख छाल, canted हरियो घाँस, पराल, पात, पाइन सुई, खाद हालन र पनि newsprint प्रयोग गर्न सकिन्छ। विभिन्न संस्कृति एक कवर सामाग्री रुचाउँछु। जैविक गीली यो पाचन प्रक्रिया मा बिरुवाहरु को लागि एक पोषक तत्व तह हुन्छ भन्ने तथ्यलाई लागि राम्रो छ।
बगैचा रूखहरू र shrubs को mulching के हो? गीली को पत्र तिनीहरूलाई वरिपरि भूमि र ट्रयाक दायरा कवर। तपाईं लामो-अभिनय Organics, उदाहरणको लागि, सुई प्रयोग वा धूलो देखे गर्न सक्नुहुन्छ। को रोडा पनि राम्रो छ। रास्पबेरी ब्रश, उदाहरणका लागि, काठ भर्न सक्छन् sawdust। Mulching छाल अझ सजावटी समारोह, त्यसैले अक्सर प्रयोग परिदृश्य डिजाइन मा वहन।
साधारण mulching लन - घाँस कतरन हटाउन छैन। एकै समयमा हेरविचार वर्षाको मौसममा Rot गर्न सक्षम छ जो पनि बाक्लो तह गठन, बच्न लिएको हुनुपर्छ मा, यो केही च्याउ पायो गर्न सकिन्छ। त्यसैले lawns कम्तिमा तीन वर्ष समय अप rake सफा गर्न।
Mulching अक्सर फल र तरकारी बढ्दै लागि प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया यो उद्देश्य कालो फिलिम प्वालहरू बिरुवाहरु कटौती गर्दै जसमा लागि प्रयोग। फिल्म विशेष गरी वर्षा पछि, जमीन देखि भन्दा शुद्ध जामुन सङ्कलन गर्न धेरै सुविधाजनक भएकाले। सेतो - तर टमाटर, उदाहरणका लागि, रातो टेप, र बन्दागोभी रुचाउँछु।
अब तपाईं एक mulching र केही undoubted लाभ यसलाई ल्याउँछ, तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा बढ्नेछ भन्ने बाली लागि उपयुक्त mulches छानेर के गर्न सक्नुहुन्छ बारेमा अलि बुझ्न।
घर रोटरी घास काटन मिसिन
Vislobryuhaya भियतनामी सुँगुर: सबै जात बारेमा। कसरी राख्न र भियतनामी सुँगुरहरु गुना प्रकार?
बोरिस Belozyorov ( "के कहाँ जब ???"): जीवनी
शिक्षक को कुन दिन? हामी सिक्न!
"यो भोक खेल" बाट सबैभन्दा स्मरणीय उद्धरण
गुर्दे रोगविज्ञान: कारणहरू, लक्षणहरू र उपचारको तरिकाहरू। पेलोनेफिसिस। नेप्रोप्टोसिस। नविकरण असक्षमता
फ्रान्सेली रेसिङ ड्राइभर zhan Alezi: जीवनी, विजय, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य